Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - imisebenzi
[U , U , U , U ] Enye yezona zibango ezithandekayo ezivela eBenoit kunye noogxa " (2016) uphando malunga neenkcukacha zentlupheko yemiboniso yezopolitiko kukuba iziphumo ziyazaliseka. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) banikezela ukufikelela kwiManfesto Corpus. Zama ukuvelisa umfanekiso 2 ukusuka Benoit et al. (2016) usebenzisa abasebenzi base-Amazon Mechanical Turk. Ziyafana njani neziphumo zakho?
[U ] Kwiprojekthi ye-InfluenzaNet i-panel yevolontiya yabalandeli bachaza iziganeko, ukusabalalisa, nokuziphatha okufuna impilo ehambelana nezifo ezifana nesifo (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Thelekisa uqhathanise ukuyila, iindleko, kunye neephene kwi-InfluenzaNet, i-Google Flu Trends, kunye neenkqubo zendlela yokulandelela umkhuhlane.
Khawucinge ngexesha elingenakunqanyulwa, ezifana nokuqhambuka kwendlela yokuvelisa inzala. Chaza iimpazamo ezinokwenzeka kwinkqubo nganye.
[U , U , U ] I- Economist yimiagazini yeendaba yeveki. Yakha iprogram yokubala komntu ukujonga ukuba umlinganiselo wabasetyhini kumadoda ekhuselekileyo ushintshile ngokuhamba kwesikhathi.
Iphephancwadi linokuthi lihluke ngokungafaniyo kwimimandla eyisibhozo eyahlukeneyo (i-Afrika, iAsia Pacific, i-Yurophu, iYurophu yaseYurophu, iLatin America, iMbindi-mpuma, iNtshona Melika, kunye ne-United Kingdom) kwaye inokukhuphela kwi-website ye-gazini. Khetha enye yale mimandla uze wenze uhlalutyo. Qinisekisa ukuchaza iinkqubo zakho ngeenkcukacha ezaneleyo ukuba ziyakuchazwa ngumnye umntu.
Lo mbuzo uphefumulelwe yiprojekthi efana noYusten Tenuto, isazi senzululwazi kwiinkampani ezixhamlayo zeCrowdFlower: funda "Ixesha Elimnandi Liyakuthanda Ama-Dudes" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) .
[U , U , U ] Ukwakha kumbuzo wangaphambili, ngoku wenze uhlalutyo kuzo zonke iindawo ezisibhozo.
Yiyiphi iimeko ezahlukileyo ozifumanayo kwimimandla?
Ingakanani ixesha kunye nemali eyathathayo ukunyusa uhlalutyo lwakho kuzo zonke ezisibhozo zemimandla?
Cinga ukuba i- Economist inamaphepha ayi-100 eyahlukileyo nganye ngeveki. Linganisa ixesha elingakanani kunye nemali ekuya kuthatha ukuhlalutya uhlalutyo lwakho ukuya kwii-100 ezihamba ngeveki.
[U , U ] Kukho iiwebhusayithi eziliqela ezifumana iprojekthi zokuvula iifowuni, ezifana no-Kaggle. Ukuthatha inxaxheba kwenye yeeprojekthi, kwaye uchaze oko ufundayo malunga neprojekthi ethile kunye neefowuni ezivulekileyo ngokubanzi.
[U ] Khangela umcimbi wakutsha nje wenjenje kwintsimi yakho. Ngaba kukho nawaphi na amaphepha ayenokuguqulwa njengeprojekti yefowuni evulekile? Kutheni okanye kutheni?
[U ] I- Purdam (2014) ichaza ukuqoqwa kwedatha ekwabiwe malunga nokucela eLondon. Gxininisa amandla kunye nobuthathaka boyilo lophando.
[U ] I-Redundancy yindlela ebalulekileyo yokuvavanya umgangatho wokuqokelela idatha. Windt and Humphreys (2016) bahlalutye kwaye bavavanya inkqubo yokuqokelela iingxelo zemicimbi yezobambano ezivela kubantu baseMpuma yeCongo. Funda iphepha.
Uyilo lwawo luqinisekisa njani ukuba i-redundancy?
Banikezela iindlela ezininzi zokuqinisekisa idatha eqokelelwe kwiprojekthi yabo. Yibinise. Yiyiphi eyona nto yayingqina kuwe?
Phakamisa indlela entsha ukuba idatha ingagunyazwa. Iziphakamiso kufuneka zizame ukwandisa ukuzithemba ukuba uya kuba nolwazi ngendlela echanekileyo kunye nokuziphatha.
[U ] I-Karim Lakhani kunye noogxa (2013) benza ikhwelo evulekile yokucela izilungiso ezintsha zokulungisa ingxaki kwi-biology ye-computing. Bafumana okungaphezulu kwama-600 athunyelweyo equlethe iikhowudi eziyi-89. Kwangeniswa, i-30 idlulile ukusebenza kwe-US National Institutes of Health MegaBLAST, kwaye ukuhanjiswa okugqwesileyo kufinyeleleke kokuchaneka nokuchithwa ngokukhawuleza (amawaka angama-1,000 ngokukhawuleza).
Funda iphepha, uze ucebise ingxaki yophando lwezenhlalakahle ezinokusebenzisa uhlobo olufanayo lomncintiswano ovulekile. Ngokukodwa, lolu hlobo lomncintiswano ovulekileyo lujolise ekukhawulezeni nasekuphuculeni ukusebenza kwe-algorithm ekhoyo. Ukuba awukwazi ukucinga ngxaki efana nale kwintsimi yakho, zama ukucacisa ukuba kutheni.
[U , U ] Iiprojekthi ezininzi zokuxhaswa kwabantu zixhomekeke kubathathi-nxaxheba be-Amazon Mechanical Turk. Bhalisa ukuba ube ngumsebenzi kwi-Amazon Mechanical Turk. Sebenzisa iyure enye esebenza apho. Oku kuchaphazela njani iingcamango zakho malunga nokuyila, umgangatho, kunye nokuziphatha kweeprojekthi zeenkqubela zabantu?